भक्तपुर १ ‘ख’ उपनिर्वाचनः महिला मतदातामा उत्साह नै छैन |
भक्तपुर १ ‘ख’ उपनिर्वाचनः महिला मतदातामा उत्साह नै छैन
प्रकाशित मिति :2019-11-27 20:39:06
भक्तपुर । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं ५ की ५० वर्षीया शुलोचना थापाले यही मंसिर १४ गते भक्तपुर १ ख बाट प्रदेश सभा सदस्यलाई भोट दिदैँ छिन् । उनको क्षेत्रका सांसद हरिशरण लामिछानेको निधन भएपछि हुन लागेको निर्वाचनमा १९ जना उम्मेदवार छन् । तर थापालाई आफ्नो क्षेत्रका उम्मेदवार को को छन् ? कस्ता छन् भन्ने थाहा छैन । ‘चुनावमा उठेका त तिनै एमाले, काँग्रेस, नेपाल मजदु किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नै हुन् । यत्ति कुरा थाहा छ । तर महिला त उठेका छैनन्’ थापाले भनिन् ।
भक्तपुरको निर्वाचनमा यसपटक ३ जना महिला उम्मेदवार छन् । तर मतदातालाई भने प्रमुख केही पार्टीबाहेक अरु उम्मेदवारबारे थाहा छैन । त्यतीमात्र होईन, थापाले भोट दिन इच्छाएका पार्टी पनि सिमित छन् । ‘पहिला पहिला दिने गरेको पनि हो । यसपटक अलि चिनेकै स्थानीय नेता नै छन् । यी पार्टीका यिनै मध्ये एउटालाई दिन्छु’ उनले प्रष्ट्याइन् ।
आफ्नो क्षेत्रको सामान्य विकास चाहाने थापामात्र होईन, यहाँका अधिकांस मतदाता आफूले भोट दिएका नेताले काम नै गरिहाल्छन् भन्ने विश्वास गर्दैनन् । जसलाई भोट दिए पनि के फरक पर्छ र ? भन्ने ठान्छन् । बिग्रेको बाटो बनाउन, गाउँमा पानीको सुबिधा दिन, स्वास्थ्य चौकीको बदलामा अस्पताल बनाउन र गाउँमा एम्बुलेन्सको सुबिधा पु¥याउन नेताहरूले काम गर्दैनन् । भोट मात्रदिने त हो नि ! भन्ने ठानेका छन्, मतदाताले ।
‘म त यसपाली भोट दिन्न भनेको बुहारीले दिनपर्छ भनेकी छिन् । त्यसैले उसैले दिन्छे, जसलाई दिन्छे दिन्छे ।’ उमेरले ७५ वर्ष लागेकी धना थापाले भनिन् । थापालाई आफ्ना बेरोजगार छोरा बु्हारीलाई जागिर र विदेश भएको कान्छो छोरा घरमै आईदिए हुन्थ्यो भन्ने छ । ‘नेताले जितेर के गर्छन् र ? भोट माग्दा हात जोड्छन् । आमा भन्छन् । भोट हालेपछि सकियो । पिठ्युँ फर्काउछन् । मेरा छोरा बुहारीले काम पाउँदैनन् । कान्छो विदेशबाट आउँदैन । आएर यहाँ काम दिन्नन्’ धनाले गुनासो पोखिन् ।
चुनावको मुखमा चाँगुनारायण ५ मा पुग्दा अधिकांस महिला घरधन्दा र गाई गोठालोमै व्यस्त थिए । चुनावमा भोट कस्लाई दिने भन्नेमा महिलाहरूले त्यति गमेका छैनन् । उनीहरू अघिल्ला वर्ष जुन चुनाव चिन्हमा भोट दिदैँ आएका छन्, त्यही चुनाव चिन्हमा भोट दिने सोचमा छन् । न त महिलाहरू यसपटकको चुनावमा को को उठेका छन् भनेर घर सल्लाह नै गर्छन् ।
खेतमा आलुमा उकेरा लगाउँदै गर्दा भेटिएकी निरु पौडेलले अघिल्लो चुनावमा जसलाई भोट दिएको हो, उसैलाई दिने बताइन् । ‘श्रीमान केही दिनलाई बाहिर जानुभएको छ । छोराछोरीसँग सल्लाह पनि हुन्न । अरु पार्टीका उम्मेदवार को उठेका छन् भन्ने नि थाहा छैन’ निरुले भनिन् ।
महिला उम्मेदवार पुग्दैनन् मतदाता समक्ष
‘महिला छन् र ? महिला भनेर मात्र भएन । उठेकै थाहा छैन । कसलाई भोट दिनु’ शुलोचना थापाले आफ्नो क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार उठेकै भए पनि भोट नदिने बताइन् । चिनेको पार्टीको महिला उठेको भए उनले भोट दिन्थिन् । तर नचिनेका महिला, नचिनेका पार्टी, नचिनेको चुनाव चिन्ह । महिला उम्मेदवार पनि उठेका छन् नि ! भनेर भन्दा उनले ‘महिला भनेरमात्र भएन नि !’ भन्ने जवाफ दिइन् ।
भक्तपुर १ ख मा संगिता पौडेल आचार्य, सुजाता देउजा र सुमना कार्की उम्मेदवार महिला हुन् । उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । तर यहाँका मतदातालाई यी उम्मेदवारबारे थाहा पनि छैन । महिला उम्मेदवारले भोट माग्न नआएको स्थानीय सम्झना बानियाँले बताइन् ।
उम्मेदवारसँग कुनै आसा नै छैन
मंसिर १४ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाएर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् । उनीहरूले जनताका आसा र अपेक्षालाई आफ्ना घोषणा पत्रमा समावेश गरेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित भोट मागिरहेका छन् । तर मतदातालाई दलका यस्ता कुराले छुन सकेको छैन । खेतबारी र घरधन्दामा व्यस्त रहेका महिला मतदातालाई यो चुनावमा जित्ने सांसदबाट त्यती ठूलो आसा पनि छैन । ‘बाटो बिग्रेको छ, बनाईदिए त हुने नि । पानी छैन । अस्पताल छैन । यस्तै साना कुरा त हो नि हामीलाई चाहिएको । गर्नेले गर्दैनन् । आस पनि छैन’ स्थानीय रेखा पौडेलले भनिन् ।
गाउँमा भोट माग्न पुगेका नेताहरूले केन्द्रका ठूला नेताले झैँ ठूला ठूला कुरा भने गर्छन् । ‘गाउँमा नेता त छन् नि, ठूला ठूला कुरा गर्छन् । कुरा मात्रै गर्छन् । रेल ल्याउने कुरा गर्छन् । गाउँमा बाटो छैन । रेल त के हो के हो ?’ उनले शंकासहितको अविश्वास व्यक्त गरिन् ।
कुल ४५ हजार १५ मतदाता रहेको यस क्षेत्रमा २३ हजार ८० महिला मतदाता छन् । चुनावमा निर्णायक मतका हकदार महिलामा चुनावका बेला नेताहरूले भन्छन् मात्र, काम गर्दैनन् भन्ने नराम्रो छाप परेको छ ।